राज्यमन्त्रीलाई पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रश्न,‘जुनियरलाई महानिर्देशक बनाउनुपर्ने के बाध्यता आइहाल्यो ?’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ राज्यमन्त्रीलाई पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रश्न,‘जुनियरलाई महानिर्देशक बनाउनुपर्ने के बाध्यता आइहाल्यो ?’
राज्यमन्त्रीलाई पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रश्न,‘जुनियरलाई महानिर्देशक बनाउनुपर्ने के बाध्यता आइहाल्यो ?’
खगराज अधिकारी बिहीबार, २०७८ साउन २१ गते, १६:१३ मा प्रकाशित
अहिले कोरोनाले देश आक्रान्त छ । अझैपनि नागरिकहरुले राम्रोसँग खोप प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसअघि पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पाँच लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप स्टकमा रहेको छ भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका १३ लाख ६५ हजार नागरिकले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन् । उहाँले भन्नुभएको स्टकमा रहेको पाँच लाख मात्रा खोप खोइ ? स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीज्यु जवाफ दिनुप¥यो ।
अर्को कुरा स्वास्थ्य संरचना भद्रगोल भयो । अहिलेसम्मका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले यसरी संरचना नै विगार्ने गरी काम गरेका थिएनन् । सिनियरलाई पन्छाउने र जुनियरलाई स्थान दिने काम भइरहेको छ । कोभिड महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सेवा विभागमा १२ औं तहको कर्मचारी खटिनुपर्ने हो । त्यहाँको दरबन्दी पनि १२ औं तहको हो ।
तर, सिनियरलाई पन्छाएर जुनियरलाई किन लगियो ? कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. आर.पी. बिच्छालाई मैले राम्ररी चिन्छु । उहाँले कान्तिमा राम्रो गर्नुभएको पनि थियो । तर, कान्ति बालको निर्देशक हटाएर किन १२ औं तहको कर्मचारी हुने ठाउँमा उहाँलाई लगियो । आजसम्म कुनैपनि मन्त्रीले यस्तो काम गरेको थिएनन् ।
१२ औं तहको व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बनाऔं । यसरी चल्दैन । १२ औं तहको दरबन्दी हुनुपर्नेमा ११ औं तहको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनु के त्यो उचित हो ? स्वास्थ्य मन्त्रालय निष्पक्ष भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
यस्तै, कोरोना विरुद्धको खोप कति प्राप्त भयो ? कहाँबाट आयो ? खोपको खरिद मूल्य कति हो ? कति रुपैंयाँमा खरिद गरिदैंछ ? मोर्डना, भेरोसेल, जोनसोन एण्ड जोनसोनको मुल्य कति हो ? कसरी नेगोसिएसन भयो ? यो विषयमा समितिलाई जान्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
हामीले थाहा पाउनुप¥यो कता—कता प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रले खोस्दैछ भन्ने विषय बाहिर आएको छ । यस्तो कार्य सच्चियोस् । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हामी साथ दिन तयार छौं । तर, समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥यो ।
(अधिकारीले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)